TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Mar 7, 2003
Barnaamijka Radio Xoriyo wax yaabaha aan idiinku hayno waxaa ka mid ah.
Ø Dagaalo dhex maray Ciidadamada Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Gumaysiga Itoobiya.
Ø Eritereya oo Itoobiya ku canbaaraysay in ay minjaxaabinayso Dadaalka nabada.
Ø Itoobiya waa dalka Adduunka ugu liita dhinaca biyaha la cabbo.
Ø Hooggaamiye kooxeedyo soomaaliyeed oo Itoobiya dhaleeceeyay.
Ø Maamulka Puntiland oo xidhay xafiisyadii ururrada xuquuqul isnaasnka.
Ø Shirkii hogaamiyaasha Carabta uga socday Magaalada Sharma-Sheekh oo lagaga hadlay arimaha Soomaaliya.
Ø Iyo Suugaan wadani ah oo aad ka heli doontaan.
Wararka naga soo gaadhaya jiida hore ee Ciidamada Xoreenta Ogaadeenya ayaa sheegaya Dagaalo ba,an oo dhex maray Dagaalyamiinta Ciidanka Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee ku sugan Ogaadeenya.
25.02.2003 Dagaal ay iskaga horyimaadeen Dagaalyamiinta Ciidamada Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Dacdareeysan ee Gumaysiga Itoobiya Dhagax-Buur iyo deegaanka Bulaale, ayaa waxaa Ciidamada Nacabka Gumaysiga Itoobiya lagaga Dilay 41 Askari oo uu ku jiro Taliyihii Ciidamadaas watay, waxaana lagaga dhaawacay 78 Askari oo kale. Dagaalkan oo ahaa mid Gacmaha laysula tagay ayay Ciidamada Gumaysiga Itoobiya adeegsadeen Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano Helikopterska. Dagaalkan oo ahaa midkii ugu khadhaadhaa ee dhex mara Ciidamada Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Gumaysiga Itoobiya Sadexdii Bilood ee la soo dhaafay ayaa waxaa Ciidamada Cadawga Itoobiya lagaga Furtay 13 Qori oo nooca Otomaatiga u dhaca ah, qaar ka mid ah Isgaadhsiinta ay Ciidamadu adeegsadaan iyo Rasaas aad u badan oo ay ka baqdeen Ciidamada isu keenka Itoobiya ee gardarada ku jooga Ogaadeenya.
26.02.2003 Iska hor imad Dagaal oo ay iskaga horyimaadeen Ciidamada geesiyiinta Xoreenta Ogaadenya iyo Ciidamada Naflacaariga Itoobiya ee ay hogaamiso TPLf meesha lagu magacaabo Laan-Jaleelo oo ka tirsan Gobolka Doolo ayaa waxaa Ciidamada Cadawga Itoobiya lagaga dilay 3 Askari 4 kalena waa lagaga dhaawacay.
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Ogaadeenya oo u adkaysan waayay Weerarada ay ku hayaan Xoogaga Gobonomo doonka ayaa waxay baryahan adeegsadaan Diyaaradaha Dagaalka kuwaas oo ay ku khalkhal galinayaan Dadwaynaha ku dhaqan deegaanada Baadiyaha. In kasta oo ay Ciidamada Itoobiya Diyaarado iyo Hub waaweenba adeegsanayaan waxaa hubaal ah in Shacab gadooday uusan karre ka hor istaagi karin Xaqooda.
XIsbiga haya talada dalka Eritereya ayaa si wayn u canbaareeyay xukuumada Itoobiya, wuxuuna xisbigu ka digay in xukuumada Itoobiya aan la isku aamini karin, isagoo ku eedeeyay inay dhabar-wareemayso dadaalka loogu jiro in si rasmi ah loo jeexo soohdinta u dhaxaysa labada dale e Eritereya iyo Itoobiya.
Xisbigu wuxuu sheegay inaan hadda caad ku rognayn in xukkumada Itoobiya ay diiddan tahay inay aqbasho go, aankii soohdinta ee soo baxay Bishii Abriil eek al hore, kaasoo lagu sameeyay ergo madaxbannaan oo si rasmi ah u jeexda soohdinta labada dal u dhaxaysa.
Xisbigu wuxuu tilmaamay in xukuumada Itoobiya ayna ku ekayn oo klaiya diidmada ay diiddan tahay inay fuliso go, aanka xadka, balse waxay si rasmi ah u carqaladaynaysaa fulinta go, aankaas, wuxuu Xisbigu bulshada caalamka uga digay in qaabka ay xukuumada Itoobiya u dhaqmayso uu minja-xaabin karo heshiiskii nabadda oo dhan.
Dalka Itoobiya ayaa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay dalalka adduunka ugu biya yar. Sida lagu sheegay warbixin laga soo saaray kaydka Biyaha ee Adduunka. sidoo kale ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay ka mid tahay dalalka Biyaheedu ugu tayo xunyihiin, sidaasna waxaa tilmaantay warbixin uu soo saaray ururka UNESCO.
Dalka Itoobiya Biyaha uu qof waliba sanadkii heli karo waa wax ka yar labo kuubik (1,749 cubic).
Meelaha Biyo la, aanta ugu daran ka jirto waxaa ka mid ah dhulka Ogaadeenya, oo sanad walba ay kumayaal dad iyo duunyo isugu jira Biyo la, aan u idlaadaan.
Hase yeeshee iyadoo ay sidaas tahay haddana xukuumada Itoobiya wax xil ah iskama saarto dhinaca Biyaha, sida ceelasha iyo matoorrada riigagga ah ee Biyaha soo saara, mana jiraan wax ceelal ah oo ay Ogaadeenya ka qodeen xukuumadihii Itoobiya isaga denbeeyay.
Ceelasha yar ee Ogaadeenya ku yaalla waxay isugu jiraan kuwo laga soo gaadhay gumaystayaashii hore, wax yar oo ay qodeen hay, adaha Samafalka iyo kuwo Ceelgacmeedya ah oo ay Dadku qoteen.
Hase yeeshee dhinaca kale waxay xukuumadaha Itoobiya dakhligooda ugu badan gelyaan dhinaca Ciidammada, oo sanad walba ay ku baxdo miisaaniyad aan xad lahayn.
Cusmaan Xasan Cali (Caato), oo ka mid ah hooggaamiye kooxeedyada soomaaliyeed ee ka qayb galaya shirka dib u-heshiisiinta soomaalida ee ka socda magaalada Nayroobi, ayaa dowlada Itoobiya ku eedeeyay inay shirka xagal-daacineyso, wuxuuna sheegay in haddii ergooyinka soomaaliyeed oo dhami ay wada gartaan faragelinta qaawan ee Itoobiya ku hayso in ay markaas ku guulaysan lahaayeen hawlaha dib u-heshiisiinta.
Mowliid Macaan Maxamuud ayaa isaguna sheegay in dowlada Itoobiya ay hooggaamiyayaasha ka soo horjeeda had iyo gore ku khuukhiso kuwa iyada la jira, wuxuuna yidhi; Itoobiya waxay doonaysaa inay nagu qasabto hooggaamiye kooxeedyada ay iyadu wadato ee gacan-saarka la leh, annaguna waanu ka diidnay.
Hooggaamiye kooxeedyo fara badan iyo dawlada ku meelgaadhka ah ayaa iyaguna soo saaray qoraal wadajir ah oo ay kaga cabanayaan fara-gelinta qaawan ee Itoobiya ay ku hayso shirka dib u-heshiisiinta, waxayna si wadajir ah u diideen in Itoobiya ay majaraha u hayso hawlaha dib u-heshiisiinta Soomaaliya.
Waxaa Magaalada Sharma-Sheikh ee dalka Masar lagu soo geba-gebeeyey shir
madaxeedkii Jaamacadda Carabta, Shirkaas oo lagaga hadlayay Arimo badan oo ku saabsan Dunida Carabta ayaa waxaa ka mid ahaa go,aamadii laga soo saaray qaar ka hadlya sidii nabad loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya. Hogaamiyayaasha Carabta ee uu shirku ugu socday Wadanka Masar ayaa waxay ka soo saareen xaalada Soomaaliya Go,aanadan.
In la adkeeyo midnimada iyo Madaxbanaanida Soomaaliya isla markaana aan fara galin lagu sameeyn arimaha gudaha ee wadanka Soomaliya.
In uu Guddi la socda arimaha Soomaaliya uu magacaabo Xoghayaha Guud ee Jaamacada Carabtu.
In la taageero Shirka dib u heshiisiinta Soomaalida uga socda Wadanka Kenya iyo qodobo kale.
Hogaamiyayaasha Carabtu waxay ugu baaqayaan kooxaha Soomaaliyeed ee ku hardamaya Awooda Soomaaliya in ay u soo jeestaan Maslaxada Dadkooda iyo Dalkooda oo ay joojiyaan Dagaalada aafeeyay Dad iyo Duunyaba guud ahaan Soomaaliya.
Maamulka Puntland ayaa amar ku bixiyay in la xidho xafiisyada dhawr kooxood oo arrimaha xuquuqul insaanka u dhadhaqaaqa, kuwaasoo xafiisyo ku lahaa gobollo kala duwan oo ka mid ah dhulka uu ka taliyo maamulka Puntland oo uu madaxda ka yahay kornayl C/llaahi Yuusuf, sidaasna waxaa laga soo xigtay sargaal sare oo ka tirsan maamulka Puntland oo ku sugan magaalada Boosaaso.
Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland ayaa soo saaray wareegto lagu xidhayo xafiisyada kooxaha xuquuqul insaanka ee gobolladaas ka hawl-gala, waxayna gaadhayaan kooxaha xafiisyada laga xidhay ilaa seddex kooxood.
Maxamuud Jaamaca Cali, oo madax ka ah hay,adda xuquuqul insaanka ee Dulmi-diid, oo ka mid ah hay, adaha la mamnuucay, ayaa sheegay in kooxaha xuquuqul insaanku ayna wax qoraal ah ka helin maamulka Puntland, balse ay kediso uun ku noqotay, ka dib markii ay warbaahinta ka maqleen in dhaqdhaqaaqooda la mamnuucay.
Maxamuud Jaamaca Cali wuxuu diiday in hay, addiisa iyo kuwa kale ee la xidhayba ay xadgudub ku sameeyeen sharciyada maamulka Puntland.
Dad badan ayaa rumaysan in hay, adahan loo mamnuucay, iyadoo lagu tuhmayo inay taageersan yihiin dadaalka ay bulshada rayidka ah ee Soomaaliya ugu jirto in dadwaynaha soomaaliyeed laga samata-bixiyo dhibaatada ay ku jiraan, waxaa kaloo xidhitaankooda sababay iyagoo si wayn ugu xog-bixiya dhibaatooyinka dhinaca xuquuqul insaanka ah ee ka dhaca gobollada Puntland.
Xusuus: Radio Xoriyo waxaad ka dhegaysan kartaa Mawjadda 19 MB ee dhererkeedu yahay 15670 KHZ, Maalmaha Talaadada iyo Jimcaha 7: 30PM waqtiga Afrikada Bari